Universal Phone Holder For Motor Bike and Motor cycle – Rocket Online Shopping
Universal Phone Holder For Motor Bike and Motor cycle
Home ShopCar AccessoriesUniversal Phone Holder For Motor Bike and Motor cycle
Universal Phone Holder For Motor Bike and Motor cycle quantity
Categories: Car Accessories, Gadget, Mobile Phone Accessories.	Tags: gps ကြည့်, universal phone holder for motor bike, ဆိုင်ကယ်စီး, ဆိုင်ကယ်ဖုန်း, ဖုန်း holder, ဖုန်းပြုတ်ကျ, လမ်းမသိ, အကောင်းဆုံး Grip, အကောင်းဆုံး holder.
ဆိုငျကယျစီးရငျးခရီးသှားတဲ့ အခါ လမျးမသိလို့ ဖုနျးထုတျပွီး GPS ကွညျ့တာတို့ ဖုနျးလာတဲ့ အခါ အိတျထဲ ကဖုနျး ကိုထုတျပွီး ပွောတာတှဟော အလှနျ မှ အန်တရာယျမြားလှနျးပါတယျ………..။
ဆိုငျကယျစီးရငျး ဖုနျးကွောငျ့မတျောတဆမှုတှမေဖွဈရလအေောငျ ဆိုငျကယျမှာ Phone Holder လေးတပျထားတာ အကောငျးဆုံးပါပဲ….။
ဖုနျး Holder ဒီဇိုငျးတှအေမြားကွီးထဲ ကမှ ဖုနျးတငျလို့လညျးအကောငျးဆုံး Grip လညျး အမိဆုံးသောဖုနျး Holder လေးနဲ့ မိတျဆကျပေးခငျြပါတယျ…….
ပုံမှနျ Holder တှလေို ဖုနျးကိုညှပျရတာမြိုးမဟုတျပဲ ကိုယျ့ဖုနျး Size အတိုငျးထညျ့ပွီး Holder လေးရဲ့ နောကျကနေ Grip လေးနဲ့ ထိနျးပေးထားတာဖွဈလို့ တျောရုံ ခြိုငျ့ဆောငျ့ရုံလောကျနဲ့ ဖုနျးပွုတျကွမှာကိုစိတျပူစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ ..။
High Way မောငျးတဲ့ Biker ကွီးမြား နဲ့ ဆိုငျကယျစီးရငျးဖုနျး ခနခနထုတျကွညျ့တတျတဲ့ သူမြားအတှကျအကောငျးဆံးသော Holder လေးပါပဲ………။
ဈေးနှုနျး – 6000 Kyats
Universal Phone Holder For Motor Bike
ဆိုင်ကယ်စီးရင်းခရီးသွားတဲ့ အခါ လမ်းမသိလို့ ဖုန်းထုတ်ပြီး GPS ကြည့်တာတို့ ဖုန်းလာတဲ့ အခါ အိတ်ထဲ ကဖုန်း ကိုထုတ်ပြီး ပြောတာတွေဟာ အလွန် မှ အန္တရာယ်များလွန်းပါတယ်………..။
ဆိုင်ကယ်စီးရင်း ဖုန်းကြောင့်မတော်တဆမှုတွေမဖြစ်ရလေအောင် ဆိုင်ကယ်မှာ Phone Holder လေးတပ်ထားတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ….။
ဖုန်း Holder ဒီဇိုင်းတွေအများကြီးထဲ ကမှ ဖုန်းတင်လို့လည်းအကောင်းဆုံး Grip လည်း အမိဆုံးသောဖုန်း Holder လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်…….
ပုံမှန် Holder တွေလို ဖုန်းကိုညှပ်ရတာမျိုးမဟုတ်ပဲ ကိုယ့်ဖုန်း Size အတိုင်းထည့်ပြီး Holder လေးရဲ့ နောက်ကနေ Grip လေးနဲ့ ထိန်းပေးထားတာဖြစ်လို့ တော်ရုံ ချိုင့်ဆောင့်ရုံလောက်နဲ့ ဖုန်းပြုတ်ကြမှာကိုစိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ ..။
High Way မောင်းတဲ့ Biker ကြီးများ နဲ့ ဆိုင်ကယ်စီးရင်းဖုန်း ခနခနထုတ်ကြည့်တတ်တဲ့ သူများအတွက်အကောင်းဆံးသော Holder လေးပါပဲ………။
ဈေးနှုန်း – 6000 Kyats
Be the first to review “Universal Phone Holder For Motor Bike and Motor cycle” Cancel reply
Mini Q light – Selfie
Beauty, Girls, Mobile Phone Accessories
TOPK 3-Port 5V 3.1A Smart Travel USB Charger Adapter
M Seal Ks10,000.00 Ks6,000.00
Mouse holder for computer Ks16,000.00 Ks14,000.00
Mini Vacuum Sealer (အသေးစား အိတျပိတျစကျ) Ks15,000.00 Ks9,000.00
Window Shade - Car Window side shade Ks10,000.00 Ks9,000.00
ံHolder for phone in Car - Discount Now Ks5,000.00 Ks3,500.00
Massage Pillow Ks20,000.00 Ks17,500.00